အိမ်လုပ် Dulce က de Leche - အိမ်လုပ် Dulce De Leche: အခြားနည်းလမ်းများ
Slow Cooker Butternut Squash Mac နှင့်ဒိန်ခဲ
အိမ်လုပ် Dulce က de Leche
အိမ်လုပ် Dulce De Leche: အခြားနည်းလမ်းများ
အကယ်၍ သင်သည်နို့ဆီနို့ဘူး၏ဘူးတစ်ဘူးရှိလျှင် dulce de leche အသုတ်တစ်မျိုးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောအချင်းချင်း။ သတိကိုသာသုံးပြီးအပူကိုအနိမ့်အမြင့်ပေါ်တွင်သာထားပါ။ ကြော်ငြာ - အထွက်နှုန်းအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရန် -၈စားသုံးခြင်း ပြင်ဆင်ချိန် -0နာရီ၁၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃နာရီ0မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၃နာရီ၁၅ မိနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၁ နို့ဆီချိုစေနိုင်သည် (သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်သလောက်ဘူးခွံများကဲ့သို့) ။ဒီပစ္စည်းစျေးဝယ် module ကိုတတိယပါတီမှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဒီစာမျက်နှာသို့တင်သွင်းသည်။ သင်ဤအချက်အလက်များနှင့်အလားတူအကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်ချိုမြိန်ငွေ့ရည်နို့ရည်၏ဘူး (သို့မဟုတ်သံဗူးများ) ကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီးအိုးတစ်လုံး (သို့) အိုးကြီးထဲထည့်ပြီး ၁ - ၂ လက်မအထိရေဖြင့်ဖုံးထားပါ။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆူပွက်စေခြင်းငှါဆောင်ခဲ့ပါ, ထို့နောက် LOW မှအပူကိုလျှော့ချ, ဒါကြောင့်ရေကိုကောင်းတဲ့နှေးကွေးမျှတည်ထားပါ။
မှတ်ချက်။ (tab lids မပါဘဲ) အစိုင်အခဲဘူးများကိုပိုနှစ်သက်သည်။
*** အလွန်အရေးကြီးသည် - ရေပမာဏသည်သံဗူး၏အောက်တွင်ကျလျှင်ရေမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ပြီးရေထည့်ပါ။ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စောင့်နေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်!
ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ရွှေ dulce de leche အတွက် ၂ နာရီမှ ၂ နာရီခွဲကြာအောင်လုပ်နိုင်သည့်အရာများကိုမျှမျှတတထားပါ။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအရောင်နှင့်အရသာအတွက် ၄ င်းတို့ကို ၃-၂ နာရီကြာမျှမျှအောင်ထားပါ။ (လျှာများကို သုံး၍ အလွန်ပူပြင်းသည့်ဖြစ်စဉ်မှတဆင့်သံဗူးများကိုသေသေချာချာလှည့်ပါ။ )
*** အရေးကြီးသော: ပူပြင်းနေချိန်တွင်ဘူးများကိုမဖွင့်ပါနှင့်။ သူတို့ကိုအဖွင့်မတိုင်မီလုံးဝအေးမြပါစေ။
ဘူးခွံများကိုဖွင့်ပါ။ dulce de leche ကိုနှိုးပါ။ ၎င်းကို Mason အိုးထဲသို့လွှဲပြောင်းပြီးရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၁ လအထိသိမ်းထားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ဘူးခွံများအထက်တွင်ရှိသောရေမျက်နှာပြင်ကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်အပူကိုအလွန်နည်းပါးစေရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Dulce de Leche သည်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာက caramel နှင့်တူသည်။ သို့သော်၎င်းသည် caramelizing ဖြစ်ပေါ်စေရန်အလုံအလောက်ရှည်လျားစွာအပူပေးသောနို့ရည်ဖြစ်သည်။ ဒါကရှည်လျားသော - အကဲဖြတ်ရှင်းပြချက်ရဲ့, ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုတိုတောင်းတဲ့တင့်: ဒါဟာဤမျှလောက်များစွာသောအချိုပွဲများတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြု creamy, dreamy ပစ္စည်းဥစ္စာ။
၎င်းသည် dulce de leche ၏အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်လုပ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ကချိုချဉ်သောနို့ဘူး၏သံဗူးခွံများဖြင့်မီးဖိုချောင်ထဲ၌သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်မှာအလွန်အေးမြသည်ဟုအမြဲထင်သည်! သင်အန္တာတိကတိုက်တွင်နေပြီး dulce de leche လိုအပ်သော်လည်းသင်၏စူပါမားကတ်တွင်ရှာမတွေ့ပါကကောင်းပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နို့ဆီရည်ချိုတဲ့နို့ကိုရှာတွေ့ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါ
မဟုတ်ရင်အသက်တာ၏ဝတ်ရည်အဖြစ်လူသိများချို, နို့ဆီနို့ဆီ၏ပုံမှန် ol '' ဘူးခွံများနှင့်အတူစတင်ပါ။
ကော်ဖီထဲမှာထည့်လိုက်။ သင်ကချစ်လိမ့်မယ်။ Tres Leches ကိတ်မုန့်လုပ်ပါ။ သင်ပျံလိမ့်မယ် ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုကိုလုပ်ပါ။ အိုးစကားလုံး ထိုအသော့ Lime Pie? အိုး
ဒါမှမဟုတ် dulce de leche ကိုလုပ်ပါ။ ဘူးခွံများမှအညွှန်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
သံဗူးများကိုအိုးထဲထည့်ပါ (သေတ္တာများကို ၁ လက်မမှ ၂ လက်မအထိဖုံးအုပ်ရန်လုံလောက်သောနက်ရှိုင်းစွာလိုအပ်သည်) …
103 နံပါတ် အဓိပ္ပါယ်
**** မှတ်ချက်။ ။ simmering ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်နေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ စတင်ကျဆင်းပါကရေကိုဆက်လက်မဖြုတ်ပါနှင့်။ သငျသညျရေသေတ္တာ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသွားချင်ကြဘူး။
*** UPDATE: အစိုင်အခဲ lids ပါသည့်ဘူးခွံများ (ပုံပြထားသော tab lids များနှင့်မတူဘဲ) ကိုပိုနှစ်သက်သည်မှာထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် tab lids များပေါက်ကွဲခြင်း (သို့) ပွင့်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြneverနာမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သတိဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
၎င်းကိုဆူပွက်အောင်ပြုလုပ်ပါ၊ ထို့နောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာမျှတစေရန်သင်ကိုချက်ချင်း LOW သို့ပြောင်းပါ။ 1 1/2 နာရီမျှတည်ထားပါ။
*** အရေးကြီး: ရေပမာဏသည်သံဗူး၏အောက်တွင်ကျလျှင်ရေမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ပြီးရေထည့်ပါ။ သံဗူး၏အောက်တွင်ရှိသောရေကိုမကျစေပါနှင့်။
ထိုအခါမှလျှာကိုသုံးပါ အရမ်းဂရုတစိုက် သံဗူးကျော်ဖွင့်။ ထို့နောက်နောက်ထပ်တစ်နာရီ…သို့မဟုတ်နှစ်နာရီလောက်မျှထားပါ။ (ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခြားနားချက်များကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ )
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်ုပ်၏ရေထဲတွင်မျောနေသောအမှုန်များကမ ၀ င်ပါစေနှင့်။ ၎င်းသည်ကယ်လစီယမ်ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရေဖြစ်သောမာကြောမှုကိုစူးစိုက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအဟုတ်, ငါတို့၌ရေပျော့ဖတ်ရှိသည်။ တကယ်တော့ငါတို့မှာ orbit ထဲပျံသန်းနိုင်တဲ့စက်ကိရိယာအလုံအလောက်ရှိနိုင်တဲ့ရေစနစ်ရှိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးပုံမှန်ရေထက် ပို၍ တိုင်းတာနိုင်သည့်အထိပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။
*** အလွန်အရေးကြီးသည် - နေပူနေစဉ် dulce de leche ၏ဘူးခွံများကိုမဖွင့်ပါနှင့်။ ***
ခရစ္စမတ်နေ့တွင် စားရန်နေရာများ ဖွင့်သည်။
အခုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ရင် ၂ နာရီကြာအောင်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ကြံပါပဲ။ ၎င်းသည်အများစုအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးရွှေဖြစ်သော်လည်းအစွန်းပတ်ပတ်လည်တွင် uncaramelized ချိုချိုနို့ရည်အိတ်ငယ်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါကအတူတကွနှိုးဆော်သောအခါ, ဒါဟာလှပသော Buttercotch အရောင်ဖြစ်ခြင်းအထိအနာ။ သို့တိုင် creamy နှင့်အိပ်မက်မက်, ပေါ့ပေါ့ caramelized အရသာ, ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးပျော့။ နို့ရည် (ဥပမာ၊ Tres Leches Cake) ကိုချိုစေသကဲ့သို့သင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကြာကြာမြဲနေလျှင်၎င်းသည်နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ နက်ရှိုင်း။ လှပသောအရောင်နှင့်အရသာခြားနားမှုသည်အလွန်လေးနက်သည်။ ဤအရာသည်သင်ငြင်းပယ်။ မရနိုင်သောမှားယွင်းသော yum factor တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီးအမဲသားနှင့် bean burritos
ဤတွင်နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ပါ! ဘယ်ဘက်ကအားလုံးပြီးပြည့်စုံအောင်မလုပ်ခင် ၂:၄၅ လောက်တုန်နေတယ်၊ ညာဘက်2နာရီ simmered ။
ဒီနေရာမှာအရာပါပဲ: သင်ပိုရှည်ရှိပါကကြောင့်ကြာကြာသွားကြကုန်အံ့။ ၃ နာရီ ၁ နာရီကြာလျှင်အရည်များများချက်ပြုတ်နိုင်ပြီး၎င်းကဲ့သို့သောထူထပ်သော dulce de leche ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သငျသညျသော်လည်း, တစ် ဦး ပါးလွှာ / လောင်းကိုက်ညီမှုကရရန်ဤအပူရန်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အပေါ်ကအားလုံးသွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိသည်ကြင်နာ၏ကောင်းပါတယ်! မတူညီသောမျှတသောအချိန်များကိုစမ်းသပ်ပြီးသင်ကြိုက်သည့်အရာကိုကြည့်ပါ။
ဤတွင်သောနေရာလေးကို dandy print ထုတ်လို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ သတိကိုသာသုံးပြီးအပူကိုအနိမ့်အမြင့်ထားပါ။
UPDATE - ဒီ post ကိုစပြီးကတည်းကငါလေ့လာခဲ့တဲ့အခြားနည်းစနစ်များပါ။
Dulce de Leche ကို Slowcooker တွင်လုပ်ခြင်း တေလာအားဖြင့်တစ် ဦး အရသာ။ ဤနည်းလမ်းသည်ပိုကြာသည်၊ သို့သော်လူအများအပြားကတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည် - ရေပမာဏမှာပြanနာနည်းသည်။
Crock Pot Dulce က de Leche စပ်တောင်ပိုင်းမီးဖိုချောင်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တူညီသော slowcooker နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသော်လည်းအချိုမြိန်သောနို့ရည်ကိုအိုးထဲသို့လွှဲပြောင်းပေးပြီးအရောင်များကိုမှေးမှိန်သွားသည်နှင့်အမျှစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကြီးမြတ်သောစိတ်ကူး!
Dulce de Leche ကို Double Boiler တွင်ပြုလုပ်ခြင်း အဆိုပါခက်ခဲတဲ့ cookie ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိုမြိန်ငွေ့ရည်နို့ကိုတူးမြောင်းထက်တဆယ့်နှစ်ဆသောဘွိုင်လာတွင်ပြုလုပ်သည်။
Parmesan Herb ခရမ်းချဉ်သီးများဖုတ်ရမည်
ကလေးတွေ E-Reader တွေရှိသင့်သလား။
စိန့်ပက်ထရစ်နေ့အတွက်အိုငျးရစျ Soda ပေါင်မုန့်လုပ်ပါ
လက်တွေ ယားယံတဲ့အခါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီး အီတလီ ကြက်စွပ်ပြုတ်
အိမ်မှာ frappuccino လုပ်နည်း
yankee လဲလှယ်လက်ဆောင် စိတ်ကူးများ